दुईटा बाघलाई साथी बनाएका भाग्यमानी मानिसहरु
कान्छा १३ वर्षको भयो, बाङगे १५ वर्षको भयो । दुवैले दिनमा ६ किलो राँगाको मासु खान्छन् । यी दुई बाघका पाँच जना मानिस साथी छन् । साथीहरुको नाम हो– हरिकृष्ण श्रेष्ठ, रमेश भण्डारी, आलोक श्रेष्ठ, राजकुमार बस्नेत र समीर पाण्डे ।
सबैभन्दा मिल्ने साथी चाहिँ हरिकृष्ण श्रेष्ठ हुन् । हरिकृष्ण सदर चिडियाखाना जाउलाखेलका जु किपर हुन् ।
यी दुई बाघ चिडियाखानामा छन् । यिनको घर पनि चिडियाखान हो, वन पनि चिडियाखाना हो ।
कान्छा र बाङगे चिडियाखानाका शान हुन्, प्रमुख आकर्षण हुन् । यिनको एक झलक पाउन दर्शकहरु मरिहत्ते गर्छन् ।
चिडियाखानामै जन्मिएका हुनाले हरिकृष्णले कान्छालाई वाल्यकालदेखि नै चिन्छन् । राम्ररी जान्दाछन् र कान्छाको मनोभाव पनि बुझ्छन् । हरिकृष्ण र कान्छाको सम्बन्ध निकै घनिष्ठ छ । ‘मेरो परिवारको सदस्य जस्तै हो यो कान्छा,’ हरिकृष्ण भन्छन् ।
कान्छा र बांगे कहिले कृत्रिम ओढारभित्र बस्छन्, कहिले सानो रुखको झ्याङमा छेकिन्छन्, कहिले चाहिँ दर्शकले हेर्ने अग्लो पर्खालको ठिक तल आएर बसिदिन्छन् । अनि, दर्शकले देख्न पाउँदैनन् । तर, पर्खिएर भए पनि हेरेरै जान्छन् दर्शक ।
चिडियाखान आएपछि बाघको एक झलक दर्शन नगरी फर्कन कसको पो मन मान्छ र !
कान्छोको जन्मघर नै यही चिडियाखाना हो । बाङगेलाई चाहिँ चितवनको जंगलबाट ल्याइएको हो । बाङगेले बित्याँस पर्ने काम गरेछ, मानिसलाई आक्रमण गरेछ । नरभक्षी बनेछ । त्यसपछि पक्राउ गरियो । अलि बांगो स्वभाव छ बाङगेको । त्यसैले चिडियाखानामा नाम दिइयो बांगे ।
तर, चिडियाखानाको वास भएपछि धेरै सोझो र मिलनसार बनेको छ बांगे ।
कान्छो चाहिँ घरपालुवा जस्तै भइसकेको छ । चिडियाखानामै जन्मिएको हुनाले निकै नै मिलनसार छ । सोझो छ । ज्ञानी पनि छ ।
माथि सुरुमै नाम लेखिएका पाँचजनाले यी बाघको स्याहारसुसार गर्छन् । खान दिन्छन् । पानी दिन्छन् । हरिकृष्ण दुवै बाघलाई माया गर्छन्, कान्छालाई छोराजस्तै मान्छन् । असाध्यै माया लाग्छ भन्छन् ।
दुवैलाई दैनिक ६/६ किलो रांगाको मासु दिईन्छ । शनिबार एकदिन चाहिँ यिनीहरुलाई भोकै राखिन्छ । मासुसँग सागपात र घाँस पनि दिइन्छ ।
यिनलाई देखेर दर्शक दंग पर्छन् तर उनीहरु चाहिँ वास्तै गर्दैनन् । आफ्नै धुनमा मस्त भएर बसिरहन्छन् । तर, स्याहरसुसार गर्ने पाँच जनालाई देखे भने चाहिँ कराउँछन्, वेचैन हुन्छन् । उनीहरुको वेचैनीको अर्थ हो खाना मागेको ।
कान्छा र बाङगेको खोर हरेक दिन सफा गरिन्छ । खाना खाने भाँडा पनि हरेक दिन सफा पानीले सफा गरिन्छ ।
कान्छा र बाङगेलाई किन सोझा र ज्ञानी भनिएको थाहा छ ? किनभने आजसम्म यिनलाई खाना खुवाउँदा र स्याहार्दा कुनै अप्रिय घटना भएको छैन । यिनले कहिले आक्रमण गरेका छैनन् ।
तर, जे भए पनि बाघ हुन्, सतर्कता भने अपनाउने गरिएको हरिकृष्ण बताउँछन् ।
यी बाघ संवेदनशील जनावर हुन् । जंगलवासी बाघ प्राकृतिक वासस्थान छाडेर यहाँ बसेका छन् । प्राकृतिक बातावरण छाडेर कृत्रिम बातावरण र कैदमा बस्न पर्दा यिनलाई रोग लाग्ने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ । त्यसैले उपचारको पनि व्यवस्था छ ।
हरिकृष्ण र उनको टिमले बाघको स्वास्थ्य स्थितिको निरन्तर निगरानी राख्छन् । विरामी भएको थाहा पाउँछन् । स्वास्थ्य बिग्रेको थाहा पाउनासाथ चिडियाखानाको भेटनरी शाखामा खबर गरिहाल्छन् । डाक्टर आउँछन् र हेर्छन् ।
चिडियाखानामा काम गर्न पाएको र यी दुई बाघसँग संगत गर्न पाएकोमा आफूलाई निकै भाग्यमानी ठान्छन् हरिकृष्ण । हरिकृष्ण मात्र होइन, बाघसँग संगत गर्न पाउने रमेश, आलोक, राजकुमार र समीर सबै भाग्यमानी हुन्, किनभने यिनले बाघजस्तो सुन्दर र दुर्लभ जनावरलाई साथी बनाउन पाएका छन् ।
प्रकाशित २0 माघ २0७४ , शनिबार | 2018-02-03 03:24:32